Tag: instagram akụkọ | Martech Zone
Kpido: instagram akụkọ
Kamua: Tinye n'ọrụ AI Iji machiini Video Rendering Formats
Ọ bụrụ na imepụta ma dekọọ vidiyo ịchọrọ ịchọrọ igosipụta na mgbasa ozi mmekọrịta, ị maara mgbalị achọrọ iji kụọ maka usoro vidiyo ọ bụla iji hụ na vidiyo gị na-etinye aka maka ikpo okwu ahụ. Nke a bụ ezigbo ihe atụ ebe ọgụgụ isi na mmụta igwe nwere ike ime ihe dị iche. Kamua mepụtara ihe online video nchịkọta akụkọ nke ga-akpaghị aka ubi gị video - mgbe na-elekwasị anya na isiokwu - gafee
Etu esi emepụta ọmarịcha anya maka akụkọ Instagram
Fraịde, Septemba 18, 2020 Satọde, Satọdee 19, 2020 Hardik Oza
Instagram nwere ihe karịrị 500 nde ndị ọrụ na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, nke pụtara ma ọ dịkarịa ala ọkara nke isi njikwa ọrụ nke echiche Instagram ma ọ bụ mepụta akụkọ kwa ụbọchị. Akụkọ Instagram bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma ị nwere ike isi jikọọ na ndị na - ege gị ntị n'ihi atụmatụ ya dị egwu nke na - agbanwe agbanwe. Dabere na ọnụ ọgụgụ, pasent 68 nke puku afọ na-ekwu na ha na-ele Akụkọ Akụkọ Instagram. Na ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị ọrụ na-eso ndị enyi, ndị ama ama,
Saturday, March 16, 2019 Fraịde, Machị 15, 2019 Douglas Karr
Enweghị ụbọchị nke na anaghị m arụ ọrụ na Illustrator, Photoshop, na InDesign na enwere m nkụda mmụọ mgbe niile site na enweghị nkwekọrịta na onyinye ngwa ọrụ ọ bụla. Enwetara m akwụkwọ ozi sitere n'aka ndị otu na Xara otu izu gara aga iji were igwe nyocha ha n'ịntanetị maka nlele ule. Na m nnọọ masịrị! Xara Cloud bu ihe eji emeputa ihe eji emeputa ihe ohuru nke emeputara maka ndi na-abughi ndi na emeputa ihe na eme ka ahia na ahia na ahia
Fraịde, Ọktọba 12, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Naanị afọ ole na ole gara aga, otu onye ọrụ ibe m kwara m emo n’ihu ọha mgbe m na-ekerịta echiche m site na vidiyo. Nsogbu ya na vidiyo m? Anọ m na-ejide ekwentị ahụ na-agbatị agbatị. Ọ jụrụ ọkachamara na nguzo m na ụlọ ọrụ dabere na usoro vidiyo m. Ọ bụ ihe nzuzu maka ihe ole na ole: Vidio niile gbasara ikike ha nwere ịdọta ma kpọsaa ozi ahụ. Ekwetaghị m na nghazi nwere mmetụta ọ bụla
Akwa na Ebube Lightning Fast Mobile Social Akụkọ
Tuesday, April 3, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Mgbasa ozi dijitalụ eruola ebe nkwụsị. 50% nke ndị okenye na-arụsi ọrụ ike izere mgbasa ozi na mkpanaka na desktọọpụ na 47% ọzọ na-arụsi ọrụ ike izere mgbasa ozi ngwa. Ndị a bụ ọnụọgụ ndị na-ebu ngwá ọrụ Wayin, Akụkọ gbasara mmekọrịta, ngwa ọrụ dị mkpa maka ndị na - ere ahịa na ndị mgbasa ozi. Taa, ọ bụrụ na ndị ọrụ na Instagram pịa ma ọ bụ swipe na Akụkọ Nkwado, ọ na-ewe sekọnd ise zuru oke maka webụsaịtị ika iji bulie ngwa ahụ. Ndị ọrụ ekwentị na-enweghị ndidi, ndakpọ olileanya na
Ihe niile I kwesiri ịma gbasara akụkọ gbasara Instagram
Wednesday, December 13, 2017 Wednesday, September 2, 2020 Douglas Karr
Instagram nwere 250 nde ndị ọrụ kwa ụbọchị yana ọ nwere ikike dị egwu maka azụmaahịa gị, ọkachasị mgbe ụlọ ọrụ gị nakweere atụmatụ Akụkọ Instagram. You maara 20% nke azụmaahịa na-enweta ozi ozugbo n'ihi Akụkọ? n'ezie, 33% nke akụkọ niile ewu ewu na-ebugo site na azụmaahịa! Kedu ihe bụ Akụkọ gbasara Instagram? Akụkọ Instagram na-enye ndị azụmaahịa ohere ịkekọrịta akụkọ ọhụụ nke ụbọchị ha, nke nwere ọtụtụ onyonyo na vidiyo. Eziokwu gbasara Akụkọ gbasara Instagram
Ebumnuche nke ọdịnaya Social Media maka ezumike
Monday, November 7, 2016 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
'Oge a bụ na ọ bụrụ na ịchọọbeghị ezumike mgbasa ozi mgbasa ozi gị, lee nnukwu infographic sitere na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi iji nye gị ụfọdụ echiche, Ezumike Ezumike 2016: 7 Fresh Ideas for Your Holiday Social Media Posts. Nke a bụ echiche asaa pụrụ iche nke nwere ike ịkwalite ihe okike gị ma dọta uche gị na akara gị mgbe ịchọrọ ya karịa! Site na Mepụta vidiyo 360 Celsius: Facebook na Youtube na-akwado ụdị vidiyo vidiyo 360 na